आईपीएलमा गुरु चेलाको भिडन्त - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
इण्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल २०२१) को दोश्रो म्याचमा दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपरकिंग्सलाई सात विकेटले पराजित गर्यो । सारा भारतमा गुरु महेन्द्र सिंह धोनी र चेला ऋषभ पन्तबीचको टक्कर हेर्न लायक रहेको र कसले बाजी मार्ला भन्ने कौतुहलता भइरहेको थियो । तर म्याच चेलाले नै हात पारे, अर्थात् दिल्लीका कप्तान ऋषभ पन्तको टीम नै विजयी भयो ।
चेन्नई किन हार्यो ?
चेन्नईले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १८८ रन बनायो । चेन्नईका लागि सुरेश रैनाले ५४ रनको अर्धशतकीय पारी खेले भने अन्य खेलाडी त्यति जम्न सकेनन् । धेरै डट बल खानु, तीव्र गतिका बलरहरुको बलमा तीव्रता नहुनुले चेन्नई पराजित बन्यो ।
चेन्नईले खेल हार्नुका ५ तथ्य
५. म्याचमा पहिले ब्याटिङ गर्न मैदान उत्रिएको चेन्नईको टीमको शुरुवात धेरै नराम्रो देखिएको थियो । टीमका दुई विकेट मात्र ७ रनको स्कोरमा गुमेका थिए । त्यसैले पारीको शुरुवाती १० ओभरमा चेन्नईले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन । खराब शुरुवातका कारण नै ब्याट्सम्यानले धेरै डट बल खेले । चेन्नईका ब्याट्सम्यानले म्याचमा ४६ वटा डट बल खेले । त्यसैले टीम २०० रन बनाउनबाट चुक्यो ।
४. जो ब्याट्सम्यान थिए उनीहरुले ठूलो पारी खेल्न सकेनन्
चेन्नईका टप पाँच ब्याट्सम्यानले १५ रन भन्दा बढीको पारी खेल्न सकेनन् । मोइन अलीले २४, सुरेश रैनाले ३६ र अम्बाती रायडूले १६ बल मात्रै खेल्न सके । यी कुनै पनि ब्याट्सम्यानले ७५ प्लसको पारी खेल्न सकेनन् । नियमित अन्तरालमा विकेट गुमाइरहँदा चेन्नईले ठूलो स्कोर खडा गर्न सकेन ।
३.पृथ्वी र शिखरको उत्कृष्ट ब्याटिङ
सैम करनले १५ बलमा ३४ रनको पारीले चेन्नईले १८८ रन बनाएको थियो । तर दिल्लीका ओपनर शिखर धवन र पृथ्वी शाले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । शाले ३८ बलमा ७२ रन र धवनले ५४ बलमा ८५ रनको पारी खेलेका थिए । यी दुई आउट हुँदासम्म दिल्ली लगभग जित नजिक पुगिसकेको थियो ।
२. तीव्र गतिका बलरमा स्पीडको कमी
वानखेडे स्टेडियममा तीव्र गतिका बलरको आवश्यक पर्दछ । त्यहाँ १४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तारमा बल फाल्न सक्नुपर्दछ । तर चेन्नईसँग १२५ – १३० सम्मकै स्पीडमा बल फाल्न सक्ने क्षमताका बलर थिए । जसको फाइदा दिल्लीले लियो ।
१. टस फ्याक्टर
चेन्नईले टस हारेका कारण पहिला ब्याटिङ गर्नुपर्यो । रातमा शीत पर्ने कारणले ब्याटिङमा फाइदा भयो र बलरलाई सकस भयो । यसमा रविन्द्र जडेजा र मोइन अली जस्ता स्पिनरले पनि केही गर्न सकेनन् । जडेजाले २ ओभरमा १६ र अलीले ३ ओभरमा ३३ रन दिए । उनीहरु दुवैले म्याचमा कुनै विकेट लिन सकेनन् ।